अन्तत् कारवाही हुने ड’रले एनसेलले बुझायो वक्यौता रकम ! – Life Nepali
अन्तत् कारवाही हुने ड’रले एनसेलले बुझायो वक्यौता रकम !
काठमाडौं, १५ पुष । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले बक्यौता रहेको पुँजीगत लाभकरमध्ये केही रकम ठूला करदाता कार्यालयलाई मंगलबार बुझाएको छ। एनसेलले लाभकर नबुझाएको भन्दै सवत्र विरोध भइरहेको थियो । सर्वसाधारणले पनि एनसेल वहिष्कार गर्ने भन्दै सामाजिक अभियान समेत चलाएका थिए । कार्यालयका एक निर्देशकले एनसेलले बक्यौता रकममध्ये ४ अर्बभन्दा बढी रकम बुझाएको बताएका छन । तर एनसेलले कति रकम बुझाएको हो भन्नेकुरा भने खुलेको छैन । बैंकले सिस्टममा राखेपछि मात्र एनसेलले कति रकम बुझाएको हो भन्ने खुल्ने छ । एभरेष्ट बैंक मार्फत एनसेलले लाभकर बापतको रकम बुझाएको हो ।
कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीवापतको लाभकर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। पटक पटक रकम तिर्न समय दिँदा पनि एनसेलले आलटाल गर्दै आएपछि सर्वसाधारणवाट समेत विरोध सुरु भएको थियो । गत मंसिर २० मै कार्यालयले उक्त रकम निर्धारणपछि तिर्नको लागि १५ दिनको समय दिएको थियो । त्यस पछि पनि पटक पटक त्यसका लागि म्याद पाएको थियो ।
ठूला करदाताको कार्यालयले एनसेललाई सर्वोच्चले यससम्बन्धी मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्णपाठमा भएबमोजिमको बक्यौता कर तथा त्यसमा जरिवाना समेत गरी उक्त रकम तिर्न एनसेललाइ निर्देशन दिएको छ । गत भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ५ गते एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसमा गत वैशाखयताको ब्याजसमेत जोडेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो । पछिल्लो समय सिमा भित्र पनि एनसेलले वक्यौता नबुझाए करदाता कार्यालयले कारवाही गर्ने भन्दै प्रकृया सुरु गरेको जनाएको थियो ।
Previous मुन्द्रेको कमेडी क्लबले राष्ट्रिय आविष्कारक महाविर पुनका लागि रु ११०,१११ सहयोग
Next आज कुन देशको मुद्राको विनिमयदर कति ?